Cumaan: Carab Naftooda Ku Waayi Gadhay Ciyaar
HomeWararka MaantaCumaan: Carab Naftooda Ku Waayi Gadhay Ciyaar
06/01/2018 Abdiwahab Ahmed
Daraasiin qof oo u dhashay waddanka Cumaan ee Khaliijka Carabta ayaa dhaawacyo halis ahi gaadheen kaddib markii ay waxyeello kasoo gaadhay ciyaar dhex martay labada dal ee UAE iyo Cumaan, taas oo koobka loogu caleemo saaray waddanka Cumaan oo markii ugu horreysay tartanka hanatay.
Ciyaartan oo ka tirsnayad tartanka dalalka Khaliijka ayaa waxa rikoodheyaal 5-4 ay guushu ku raacday waddanka Cumaan, hase yeeshee, garoonkii ayaa isku beddelay goob dhiiggu qulqulayo kaddib markii taageereyaal saqafka sare saarnaa ay damaashaadkii ciyaarta kasoo daateen halkii ay taagnaayeen oo ahayd dusha sare ee garoonka.
Lama sheegin dhimasho dhacday, hase yeeshee, sida ay ku warantay warbaahinta Arab Times, waxa dhakhtarka loo qaaday 30 qof oo taageerayey xulka qaranka Cumaan.
Gawaadhida gurmadka degdegga ayaa soo galay garoonka gudihiisa, waxaanay la yaaceen dadkii waxyeellada qabay ee garoonka dhex jiifay, kuwaas oo lagu daaweynayo cusbitaalka A&E.
Dadka waxyeelladu gaadhay maaha kuwii kasoo daatay dusha sare oo kaliya, hase yeeshee, waxa jiray kuwo kale oo isjiidhay wakhti ay u ordayeen dhinaca ciyaaryahannada xulkooda oo ay doonayeen inay la damaashaadaan.
Ciyaartan oo ka dhacday garoonka Jaber Stadium ee waddanka Kuwait oo martigelinaya tartanka 23aaad ee dalalka Khaliijjka, ayaa wakhtigii caadiga ahaa waxay labada dal ku dhamaysteen 0-0, hase yeeshee rikoodheyaal ayaa ay Cumaan guushu ku raacday.
Bale Oo Real Madrid Uga ciyaaraya Lambarka 9
16/07/2015 Abdiwahab Ahmed
Gool-haye Bravo Oo Jebiyey Rikoodhka Gool Illaalinta Horyaalka Spain Mid Cusubna Dhigay
04/10/2014 Abdiwahab Ahmed
Liverpool Oo Chelsea Ka iibsatay Hal Ciyaartoy iyo Mohamed Salah oo ay Qarka u saaran tahay
02/06/2017 Abdiwahab Ahmed